BlueGriffon: a WYSIWYG web editor for Linux | Site na Linux
BlueGriffon dị maka GNU / Linux, Mac OS X y Windows, jiri engine nsụgharị Gecko (otu ihe onye anyi huru n'anya ji Firefox 4), nwere nkwado maka teknụzụ weebụ kachasị ọhụrụ, dịka HTML5 y CCS3, na-enye gị ohere iji ihe oyiyi eme ihe SVG n'ihi ya, i nwere ike na-agụnye ha na gị Kacha ọhụrụ aghụghọ n'ihi na IE9O nwekwara modul na-enye gị ohere itinye usoro mgbakọ na mwepụ na ụdị kachasị mma LaTeX Nke kachasị mma, ọ na-abịa n'ọtụtụ asụsụ ma na-enye modul mgbakwunye iji gbasaa ohere gị.
Maka ịmepụta ibe weebụ ngwa mgbakwunye ahụ bụ ezigbo nchịkọta akụkọ. Oge mbu sitere na ndi editọ koodu, mana ohuru ohuru putara ngwa ngwa nke webatara ihe ndia WYSIWYG (Ihe See Na-ahụ Bụ Ihe Get Na-enweta), nke mere ka o kwe omume imepụta na ihe mejupụtara nke ibe. Ndị editọ a tinyekwara na ike ha njikwa nke Ugwu Cascade, CSS, ekele nke HTML malitere iji nweta nkewa dị mkpa n'etiti ọdịnaya na oyi akwa anya.
Achọrọ ezigbo onye editọ iji hazie ibe. Ndị anyị na-ahọrọ free software nwere ike ịdabere na ruo mgbe 2005 na Nvu, nchịkọta akụkọ nchịkọta ọtụtụ ike. Ya mmepe kwụsịrị na ụbọchị, na ruo mgbe 2010 ọ gara n'ihu na-emelite n'okpuru aha Kompozer, dịkwa ka sọftụwia na-enweghị sọftụwia. Onye nchịkọta akụkọ W3C edeghị, Amaya, enweela ọfụma, ebe mmepe ya kwụsịrị na 2009. Ndị editọ a enyeghị ọrụ dị mkpa iji rụọ ọrụ na ikike ọhụrụ HTML 5 na-enye.
Na njedebe nke 2010 anyị ahụla ngosi nke BlueGriffon, onye editọ ọhụụ ọhụụ emere maka iji ohere nke HTML 5. Onye okike ya bụ onye edemede nke Nvu, nke na-eme ka ịdị mma nke ọrụ a na nsonaazụ ya pụta. BlueGriffon na-eji igwe nsụgharị Firefox (nsụgharị 4), ọ bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, ọ bụkwa usoro ikpo okwu. Ọ kwadebere ịrụ ọrụ na HTML 4, XHTML 1 na HTML 5 (ma na HTML na XML), ọ gụnyere ngwaọrụ iji mepụta ma jikwaa CSS na ụdị nke 3 ya, jikọta multimedia na HTML 5 mkpado, mmezi tebụl mmekọrịta, na ntinye nke WebFonts, ya mere ejiji na afo abuo gara aga. Na mgbakwunye, ọ na-ejikwazi eserese vektọ n'ụdị SVG. Ọdịdị nke ngwa ahụ na-enye ohere ịgbakwunye mmeju ma ọ bụ tinye-na ya, nke na-agbatị ọrụ ya (mana a na-akwụ ha ụgwọ).
Ka ịwụnye BlueGriffon na nkesa kachasị amasị gị ị ga-ebudata faịlụ kwekọrọ Ubuntu y Fedora, n'ihe banyere Archlinux ị nwere ike ime ya site na mgbasa ozi Ngwunye (AUR).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » BlueGriffon: a WYSIWYG web editor for Linux
Maka ndị na-etinye bluegriffon ụdị 64-bit na Ubuntu 12.04 na mgbe ọ na-eme ya, ọ na-enye ha njehie ebe ọ na-agwa anyị na faịlụ profaịlụ adịghị enweta, a na-edozi ya site n'inye ikikere kwesịrị ekwesị na faịlụ nhazi. sarl nke zoro na folda nkeonwe
ndewo, achọpụtara m na ọkwa a na-atọ m ụtọ, mana usoro nrụnye anaghị adị m ka nke doro anya, ọ nweghị debian installer ma ọ bụ site na ọnụ? Ekele na ekele Achọrọ m iji ya, gịnị ma ọ bụrụ naanị otu oge ka m hapụrụ dreamweaver.
Ma olee otu esi etinye ya?
Ebudatara m faịlụ ahụ .install na faịlụ .tar.bz2 na enweghị m ihe ọ bụla na-eme ha ...
Nye igbu ikikere ka .install faịlụ (nri pịa, ikikere ma họrọ nhọrọ na-enwe ike igbu faịlụ).
Mgbe ahụ na-agba ọsọ ya. Mfe.
Meela ... nke ahụ bụ ihe anyị nọ ebe a maka! 🙂
Ngwá ọrụ na-ekwe nkwa, naanị ihe anaghị amasị m bụ na ọ ka edobeghị anya yana yana enwere ụfọdụ ọrụ na-adịghị, kama ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngosipụta ebe ọ bụ na amachibidoro ọrụ ndị kachasị ọrụ na ị ga - zụta ha ọbụlagodi na nke a bụ ime ka ọrụ ahụ dị larịị.
Ezigbo mma m wụnye ya na Arch site na iji yaourt na enweghị m nsogbu maka ekele maka ozi ahụ.
Zaghachi Jeffry Roldán
Enwere m mmasị na bluegriffon n'ihi na esi m na nrọ ahụ pụta, mana m hụrụ ederede ederede m n'anya karịa
Nwere ike inyere m aka dịka m na-eme iji gbanwee akara ngosi «Preview in a browser» ihe na - eme bụ na m nyere ya nhọrọ «cheta nhọrọ m maka njikọ» mgbe m meghere ya maka oge izizi ma ugbu a enweghị m ike ịnweta ibe weebụ ọ bụla lee ihu oru ahu
bara uba dijo
MMM m no na ubuntu 14.04 64 bits download bluegriffon ahubeghi m wunye na .bin a agbanyeghi na m nye ya ikike ime ya emeghi ihe o bula obula imara ihe enwere ike ime ????
Ga na nnọkọ ahụ anyị nwere ma jụọ ajụjụ ahụ, ịza ajụjụ na-agwụ ike ma sie ike ịgbaso.
Nwere otu nsogbu ụnyaahụ, mana na Xubuntu 14.04 64bits.
Ngwọta: unzip faịlụ na ibudatara na ukara website ebe ọ bụla ị chọrọ. Mgbe ahụ na folda ahụ emepụtara akpọrọ "bluegriffon", chọọ faịlụ ahụ nwere otu aha (na ihe ọ bụla ọzọ). Pịa ugboro abụọ ma ị nọ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ imepụta ma ọ bụ ụzọ mkpirisi, ị ga - egosipụta ụzọ nke faịlị ahụ wee chọọ ntanetị maka akara ngosi mmemme ahụ iji mata ya nke ọma.
Olileanya ọ ga-ejere mmadụ ozi. Banyere.
Kubuntu 11.10 Beta2 dị maka nbudata